विश्वासको मत लिनै लागेका बेला मुख्यमन्त्री राईलाई कसले दियो यति गम्भीर सूचना ? माधव नेपाल झस्किए !
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसबाट प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राई एमालेले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै सजग बनेका छन् ।
मङ्लबार, कार्तिक ३०, २०७८ ३:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसबाट प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राई एमालेले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै सजग बनेका छन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धनका प्रदेश सांसदहरूलाई फकाएर राईको प्रस्ताव विफल गराउन सक्ने सूचना आएको भन्दै राईले सजगता अपनाएका हुन् । ठूलो त्याग र मेहनतपश्चात आफू नेतृत्वको पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनाउन सफल माधव नेपाल एमालेले षडयन्त्र गर्न सक्ने भन्दै झस्किएका छन् ।
राईले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदैछन् । मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिन प्रदेश सांसदहरूलाई विराटनगरस्थित बिग होटलमा राखेर पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्देशन दिएका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले विश्वासको मतका लागि आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धनका प्रदेश सांसदहरूलाई फकाएर राईको प्रस्ताव विफल गराउन सक्ने भन्दै गठबन्धन दलका सबै सांसदहरूलाई एकै ठाउँ भेला गरेर राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । ‘विश्वासको मतका लागि संयुक्त रुपमा सल्लाह गर्न र केही सांसदहरूलाई निर्देशन दिन गठबन्धन दलका सबै प्रदेश सांसद एकै ठाउँ भेला भएका छौं,’ उनले भने, ‘सांसदहरूसँग हट कन्ट्याक्टमा बस्न र सानोतिनो समस्यामा फस्दा विश्वासको मत दिन छुट्नसक्ने भएकोले पनि भेला भएका हौं ।’
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मंगलबार १२स् ३० बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् । यसअघि कात्तिक २३ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि आवश्यक तयारी नपुगेकोले मुख्यमन्त्री राईको आग्रहमा सभामुख भण्डारीले मंगलबारसम्मका लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेका थिए ।
यता प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई आज मंगलबार विश्वासको मत लिँदैछन् । मध्याह्न साढे १२ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिनेछन् । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राईले विश्वासको मत दिन सांसलाई ‘ह्वीप’ नै लगाएका छन् । विराटनगरको बिग होटलमा सांसदलाई सोमवार भेला गरेर ह्वीप जारी गरेका थिए ।
सोमबार नै प्रदेशको सत्तासाझेदार कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले राजीनामा दिएपछि गत १६ कात्तिकमा राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राइले आफ्नो पक्षमा मत पुग्ने दाबी गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र जसपा सम्मिलित ५ दलीय गठबन्धनबाट राई मुख्यमन्त्री हुन् । प्रदेशको ५ दलीय सत्ता गठबन्धनमा ५० सांसद छन् ।